Translate Myanmar (Burmese) to Igbo | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Igbo, Myanmar (Burmese) to Igbo translations, Myanmar (Burmese) to Igbo Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Nnọọ, kedu ka ị mere
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Enwere onye ọ bụla?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Enwere m gị n'anya nke ukwuu
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Ego ole ka hamburger dị?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Ị nwere ike ịkpọ m tagzi?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး ọ dị m nwute
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Enwere m mmasị
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Ụgbọ elu m egbu oge
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Anọ m ebe maka azụmahịa
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Ndewo, aha m bu
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Ọ dị m nwute, mana m lụrụ di
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Ọ ga-amasị m ịjụ gị
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Ị nwere ike ịkpọga m ọdụ ụgbọ elu?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Kedu oge ugbu a, biko?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Ebee ka ọdụ ndị uwe ojii kacha nso dị?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Enwere m ike ịgbazinye chaja ekwentị gị biko?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Ị nwere ike ị nyere m aka?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Biko nye m mmanya, biko?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Ego ole ka ọ na-eri?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Mmiri nri na-enye m nsogbu
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Kpọọ dọkịta
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Enwere dọkịta?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Enwere m ike ịnweta oku?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Kpọọ m onyeisi gị biko.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Ebeadị ezigbo mma
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Kpọga m n'ụlọ nkwari akụ biko
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Kedu nọmba ọnụ ụlọ m?